Zvikonzero zvishanu Chikwata Chako Chekutengesa Hachisi Kusvika Kwazvo Quotas | Martech Zone
Qvidian yakaburitsa yavo Sales Execution Trends report ye 2015 uye izere nemateki pamadhipatimendi ekutengesa ayo anofanirwa kukubatsira kuyera yako yekutengesa kuita zvichipesana nezvakawanikwa.
Masangano muna 2015 ari kuita shanduko yakakosha mukukura zvine hukasha. Vatungamiriri vezvekutengesa vanofanirwa kufunga nezvekuita kuti zvikwata zvavo zvibudirire nekutarisa kupfuura kwehunyanzvi hwekutengesa kugonesa uye kupa masimba ekutengesa nemaitiro ekupedzisira-kusvika-kumagumo-ekutengesa kuuraya.
Sezvo madhipatimendi ekutengesa ari kukurudzira kukwidziridzwa kwemitengo uye kuvandudza kuwedzerwa kwequota, zvikonzero zvishanu zvakakosha zvekusasvikira makota zviripo:
42% yemikana yakapera hapana sarudzo.
41% yemikana yakapera nekuti kutengesa kwaive isingakwanise kutaurisa kukosha.
36% yemikana yakarasika nekuti kutengesa kwaive kuremerwa nemamwe mabasa ekutungamira uye kwete kushandisa nguva kutengesa.
36% yemikana yakarasika nekuti kukwirisa reps kunotora kureba.
30% yemikana yakarasika nekuti nekuti vatengesi vekutengesa havana kukwanisa kunyatso kukwanisa kudzidzisa reps.
Pane kumwe kunzwisisa kukuru kuseri kwenhamba idzi!
Kana makambani asiri kupera muchisarudzo, wobva waenderera mberi nekukurudzira hukama ihwohwo nekutengesa michina, email kushambadzira, uye chiitiko uye mimwe mikana yekuvaka hukama inodikanwa.
Kana kutengesa kusingakwanise kutaurirana zvine hungwaru kukosha, kwekutanga uye sekondari kutsvagisa pamwe nemapepa machena, nyaya dzenyaya uye zvipupuriro idanho rekushambadzira rinodiwa.
Kana kutengesa kuchipiswa pamwe nemamwe mabasa, kutengesa otomatiki kwakakosha - kubva auto yekuchaira kusvika kune yekupa manejimendi.
Uye kana kukwirisa kutengesa reps uye coaching poindi kune vamwe vanhu zviwanikwa uye mikana yekudzidzisa mukati mesangano.
Iyo infographic ine zvimwe zvinowana kuti kutengesa uye kushambadzira kunofanirwa kunge kuri kunyatsoteerera kune - kunyanya nzwisisa nzira yekutenga kwevatengi. Nepo vatengi vazhinji vachitarisa iyo funnel, Ndinotenda vanorasikirwa nenhamba yezvakatipoteredza zvinokanganisa sarudzo yekutenga - zvese zviri pakati pekuvaka zvese kuvimba nechiremera netarisiro.
The Maitiro Ekutengesa Maitiro Chirevo chinoratidzira kuti nepo masangano mazhinji nhasi ari kutora danho kubva pakuchenjera kuenda mukukura zvine hukasha, zvipingamupinyi zvakaita sekumisikidza kuwedzera, kushomeka kwenzira yekutenga yakagadzirirwa uye zvemukati, uye masisitimu akaganhurirwa ane mashoma analytics vese vari kushanda pamwechete kuti vakanganise iyo yepazasi mutsara, inodzivisa kuwana kwequota, uye kudzivirira kukura kwakasimba. Kuti vakwire pamusoro pematambudziko aya, masangano anofanirwa kugadzirisa nzvimbo dzakakosha dzekutengesa kuti vabudirire kuvaka, kuita uye kugadzirisa pazvirongwa zvekutengesa.
Tags: 2015vatengi kutenga rwendomutengi kutenga maitiromakosi akasuwaakapotsa kutengesa huwanduqvidhizvikonzero zvekutengesakutengesa kushandisa michinaKugonesa Kugonesakutengesa kuitiswaMaitiro Ekutengesa MaitiroZvirongwa Zvekutengesaquota yekutengesa
Iko Kushungurudzika kwekushambadzira kune iyo Sosaiti Sangano
Nei uye Maitiro Ekumisikidza iyo Gravatar Akaunti
Jul 19, 2015 pa 8: 29 AM
Nhamba huru chaiyo iyo inogona kutungamirira kune kunyatsoshanda kwechokwadi. Zvinozondibatsira kuti ndichinje kutarisa kwangu uye kuita sarudzo dzakanyatsojeka.
Dec 16, 2020 pa 1: 10 AM
Chinyorwa chine njere. Sezvo ndashanda muchikwata chekutengesa kwenguva yakareba, ndinonzwisisa mapoinzi amakasimbisa. Ini ndinobvumirana nepfungwa yako nezve kuita kwekutengesa otomatiki. Ichandibatsira kuita zvirinani zvekutengesa sarudzo.
Jan 23, 2021 na8:37 PM
Ini ndinobvuma kuti kushaikwa kwekukurumidza kuita sarudzo ndicho chimwe chezvikonzero zvakakosha nei timu yekutengesa isingakwanise kusvika kune yavo chinangwa. Izvi takazviona kakawanda. Sarudzo yekukurumidza ndiyo mhinduro. "Nguva imari!"